Anesimba Amulet weVatumwa vakuru uye Olimpiki Midzimu - Nyika yeAmulets
Yakasimba Amulet yeVatumwa vakuru uye Olimpiki Midzimu
50 zvinhu zvasara
zvinhu Kwete kuvhurwa Akabatwa
Iyo amulet ine Seal yeVatumwa vakuru uye Olimpiki Midzimu inoshandiswa kukumbira chero yeiyo huru vatumwa kana mweya uye kukumbira kwavo nyasha. Mune ino isinganzwisisike amulet kwete chete arcangels anogona kukumbirwa asi allso iwo manomwe Olimpiki Midzimu. Iyi amulet ichakubatsira iwe kutaurirana navo vese pazvinenge zvichidikanwa.
Kunyengetedza ani zvake wavo anongoti zita racho 3 nguva dzinotevera: I, (zita rako) invoke (zita remutumwa mukuru kana mweya) kushumira chinangwa changu. Mushure meizvi iwe unonyatsotaura zvakajeka chinangwa chako kwaari uye kupedzisa neku: "Ndapota famba kunze uye uite chido changu chizadzike. Kubhadhara kwangu kuvonga kwandinonzwa paunounza kubudirira. "
Maitiro ekushanda neOlympic Midzimu
Kune nzira mbiri dzekupfeka iyi amulet:
Yakavanzwa: iwe unoshandisa refu yakakosha kiyi kuitira kuti amulet iri padyo nemoyo wako chakra, izvo zvinoita kuti mweya ishandise pane rako simba
Zvinoonekwa: Iyo amulet yakapfeka padhuze nehuro yako chakra. Muchiitiko ichi, midzimu ichashanda pasimba rako asi kunyanya pasimba rekunze
Chinhu chete chaunofanirwa kuita kupfeka. Hapana chimwezve, chakavimbiswa. Haufanire kupa kana kupira chero chinhu. Ivo Ngirozi Huru, Abrasax uye iyo olympic mweya ndichagara ndinemi kuti ndikubatsire.
Iyo nyowani yepamusoro Ruvara amulet sarudzo yemubatanidzwa wemasimba epapel pini iyo inotanga kushanda nekukasira uye yakajairika amulet inoda mazuva makumi maviri nemasere ekumisikidza. Iyi nyowani nyowani inogona kubatwa nevamwe vanhu asi inoda recharge yega 9 mwedzi. Iwe uchawana yekutanga recharge yemahara. Zvekuchaja zvekare uye nekuchenesa iwe unogona kushandisa yakakosha pad iyo iwe yaunowana pano:
Ngirozi huru & Olimpiki Midzimu Yekuchaja uye Kuchenesa Pad